Kulanka El Clasico Oo La Shaaciyay Wakhtiga La Ciyaarayo & Dalka Ingiriisnka Oo Aan Laga Daawan Doonin
HomeWararka MaantaKulanka El Clasico Oo La Shaaciyay Wakhtiga La Ciyaarayo & Dalka Ingiriisnka Oo Aan Laga Daawan Doonin
Kulanka ugu weyn ama ugu horeeya kubada cagta ee El Clasico ee xilli ciyaareedkan ayaan laga daawan doonin Telefishinada Great Britian, kadib markii La Liga ay xaqiijiyeen in kulankani ay dhici doonto 3:15pm (Saacada Ingiriiska) maalinta Sabtida ee 3-da bisha December.
Sharci muddo dheer soo taagnaa oo ay isku raaceen xidhiidhka kubadda cagta Ingiriiska, Premier League iyo Football League ayaa reebaya in si toos ah loo baahiyo tartan kubaddeed inta u dhaxeysa 2:45pm iyo 5:15pm ee maalinta Sabtida meel walba oo ka mid ah UK, si sarre loogu qaado in taageerayaashu ay ka xaadiraan garoomadda.
Taas ayaa la micno ah in kulanka u dhaxeeya kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ee Camp Nou oo laga daawan doono in ka baddan 100 waddan aan laga daawan doonin waddanka Britain, sida sannadkii hore dhacday oo kale.
Madaxda horyaalka La Liga ayaa kulanka Madrid iyo Barcelona ku soo beegaya 3-da Galabnimo ee wakhtiga Ingiriiska, si ay uga faa’ideystaan inay helaan dad baddan oo daawada kulanka ugu xamaasadda baddan kooxaha kubadda cagta, isla markaana ay u cunaan qeyb ka mid ah daawadayaasha Premier League.
Iyadoo labada kooxood ee ka mid ah kooxaha ugu waa weyn ee caalamka ay ciyaarayaan Galabinimo Sabti ah oo wakhtigii Premier League looga bartay, La Liga ayaa sarre u kac ka sameynaysa dhanka daawashadda iyo tartanka ay kula jiraan Premier League.
“Wakhtiyadan aan ciyaarayno waxa ay laba jibaareysaa dhaqaalaha na soo gelaysa” ayuu yidhi madaxweynaha La Liga Javier Tebas. In kulanka la ciyaaro 3:15pm wakhtiga Ingiriiska ama 6:15pm wakhtiga Geeska Afrika waxa ay ka dhigaysaa in laga daawan karo Maraykanka wakhti fiican, si la mid ah South America, China iyo waddamada kale ee Asia iyo qaarada Afrika.